राम्रो सेक्स पर्फर्मेन्सको अवधि कति हुनुपर्छ? यसो भन्नुहुन्छ डा. विकासनन्द « Light Nepal
राम्रो सेक्स पर्फर्मेन्सको अवधि कति हुनुपर्छ? यसो भन्नुहुन्छ डा. विकासनन्द
Published On : 11 February, 2018 1:21 pm
के हो तान्त्रिक सेक्स ? – सेक्सलाई आगोसँग तुलना गरिन्छ । आगोमाथि नियन्त्रण गर्न सिकेपछि नै वनमान्छे मान्छे भएको हो र सभ्यता विकास भएको हो । तर, मान्छेले आगोमाथि नियन्त्रण गर्न सकेन वा आगोलाई सदुपयोग गर्न सकेन भने अकल्पनीय विनास हुन्छ । सेक्स पनि आन्तरिक आगो हो । सदुपयोग भयो भने सिर्जना हुन्छ । भएन भने चरित्रको विनाश हुन्छ ।
बुद्धिमा भन्दा ‘इमोसन’मा पाँच हजार गुणा बढी शक्ति हुन्छ । इमोसनसँग हृदय जोडिन्छ, बुद्धिसँग दिमाग । दिमाग र हृदय दुवैले शरीरमा ‘इलेक्ट्रिसिटी’ उत्पादन गर्छन् । जसलाई बायोइलेक्टिेसिटी भनिन्छ ।
दिमाग र हृदयले उत्पादन गरेको बिजुली नाप्ने मेसिन क्रमशः ईईजी र ईसीजी हो । यी मेसिनले मापन गर्दा दिमागभन्दा दिलले इलेक्ट्रिसिटी ५० गुणा बढी र ‘म्याग्नेटिकल फोर्स’ पाँच हजार गुणा बढी उत्पादन गर्ने पत्ता लागेको छ । यसरी दिमागभन्दा हृदय बढी शक्तिशाली भएको स्पष्ट हुन्छ । दुनियाँमा जति पनि विकास वा विनाश भएका छन्, त्यसमा दिमागको भन्दा हृदयको बढी भूमिका हुन्छ ।
सेक्स पनि इमोसन हो । त्यसैले यो शक्तिशाली छ । ‘सेक्सुअल फ्ल्युड’ स्खलित भयो भने सन्तान उत्पादन हुन्छ । सन्तान बन्नु वा जन्मनु प्रकृतिको गजबको सिर्जनशीलता हो ।
एउटा मानिस जसलाई समान्य चित्रसमेत बनाउन आउँदैन, उसले गजबको मानिस निर्माण गर्छ । यदि स्खलित भएन भने त्यो ऊर्जाबाट संसारको सबैभन्दा ठूलो कला र विज्ञान पनि निर्माण भएको पाइन्छ ।
अर्थात्, सेक्सुअल ऊर्जा स्खलित नहुँदा पनि ‘क्रिएटिभिटी’ सुरु हुन्छ । लियोनार्दाे दा भिन्ची र माइकल एन्जेलो मानव इतिहासमा महानतम चित्रकार र मूर्तिकार हुन् । यी दुवै अविवाहित थिए । यिनीहरूको सेक्सुअल ऊर्जा कलामा रूपान्तरित भएको देखिन्छ ।
सेक्सुअल ऊर्जाका चार वटा सम्भावना छन् । पहिलो सम्भावना सन्तान उत्पादन हो । दोस्रोमा मनोरञ्जन, तेस्रोमा कला र चौथोमा मुक्ति पर्छ ।
तर, बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँ छ भने यी चारवटामध्ये कुनै पनि सम्भावनामा सेक्सुअल ऊर्जा प्रयोग भएन भने मान्छे पागल हुने सम्भावना बढ्छ । तसर्थ सेक्स सन्तान उत्पादन, मनोरञ्जन, कला वा अध्यात्ममध्ये कुनै एकमा प्रयोग हुनैपर्छ ।
यौन इच्छा हुँदा वा मस्तिष्क सिर्जनशील हुँदा टेस्टोस्टेरोन हार्माेन रिलिज भइरहेको हुन्छ । यसको अर्थ सेक्स, सिर्जना र आनन्दको स्रोत एउटै हो । हामीले कसरी प्रयोग गर्छाैं भन्ने विषय नै प्रमुख हो ।
सेक्स क्रिया हो । क्रियामा ऊर्जा खर्च हुन्छ । मांस खाद्यान्नमध्ये ऊर्जाको राम्रो स्रोत भएका कारण यसलाई तन्त्रले समाहित गरेको हो । अर्काेतर्फ फलाहारीभन्दा मांसाहारीमा ‘सेक्सुअल फिलिङ’ बढी हुन्छ ।
माछामा ‘ओमेगा थ्री’ भन्ने तेल पाइन्छ । मान्छेले जब माछा खान थाल्यो, त्यसपछिमात्र खास सभ्यताको विकास हुन थालेको देखिन्छ । माछामा रहेको ओमेगा तेल मस्तिष्कमैत्री तेल हो ।
हामीले खाइरहेको सामान्य तेलले दिमागलाई सुस्त बनाउँछ । तर, माछाको तेलले ‘फास्ट’ बनाउँछ । तान्त्रिक सेक्समा दिमाग सन्तुलित हुनुपर्छ । अर्थात्, उत्तेजनालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।
सामान्य सेक्सको उद्देश्य स्खलन हो । तर, तान्त्रिक सेक्सको उद्देश्य ऊध्र्वगमन अर्थात् यौन रस आध्यात्मिक ऊर्जामा परिणत गरेर मस्तिष्कतर्फ लैजानु हो । माछा खानाले दिमागलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने हुनाले नै तन्त्रमा माछाको प्रयोग अनिवार्य गरिएको बुझिन्छ ।
मदिरा मनलाई भड्कन नदिनका लागि प्रयोग गरिन्छ । बाहिर ध्यान नजाओस् वा मन नभड्कियोस् भनेर मनलाई पर्दा हाल्नका लागि सेक्सभन्दा अगाडि एक वा दुई पेग वाइन पिउन सकिन्छ ।
एक वा दुई पेगले बहिर्मुखी हुनबाट रोक्छ । अन्तरमुखी बनाउँछ र सम्पूर्ण ध्यान तान्त्रिक सेक्समा केन्द्रित हुन्छ । तर, सीमाभन्दा बढी मदिरासेवनले सेक्सको पर्फर्मेन्स घटाउँछ ।
मुख्य कुरा, तान्त्रिक सेक्सका लागि शरीर र दिमागलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । योग, प्राणायाम तथा व्यायामले शरीर र दिमाग तरोताजा रहन्छन् । तर, सेक्सका खास यन्त्र भनेका योनी, लिंग र मलद्वार हुन् ।
योनी र लिंगलाई मजबुत बनाउन पनि विभिन्न व्यायाम गर्नुपर्छ । योनी र लिंगसम्बन्धी व्यायामका लागि बज्रौली, सहजोली, मूलबन्ध, अश्विनी, शक्तिशालिनी र अमरोलीजस्ता मुद्रा छन् । यी मुद्राको अभ्यास कम्तीमा पनि छ महिना वा एक वर्ष गरेपछि मात्र तान्त्रिक सेक्समा सहभागी हुन सकिन्छ ।
पुरुषको मलद्वार र लिंगको बीचमा मूलाधार चक्रको स्थान छ । त्यसलाई मात्र दबाउनु मूलबन्ध मुद्रा हो । सास तान्दै र छाड्दै मूलाधार चक्रको व्यायाम गर्नुपर्छ । मलद्वार र लिंगको बीचमा हुने यस केन्द्रमा नै सेक्सको खास ‘इनर्जी’ हुन्छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै ‘सेक्सुअल इमोसन’ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । खास गरी, यस केन्द्रलाई टाइट गर्नेबित्तिकै स्खलन र सेक्सुअल ऊर्जा तल जानुको साटो माथितिर जान्छ । यसलाई बुझ्नका लागि पिसाबको अन्तिम धार फेर्दा कहाँ दबाब पर्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ । त्यही दबाब पर्ने स्थल नै मूलाधार चक्र हो ।
महिलाले भने सहजोली मुद्राको अ्रभ्यास गर्नुपर्छ । यसलाई ‘किगल एक्सरसाइज’ पनि भनिन्छ । यसलाई अमेरिकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. आर्नाेल्ड किगलले चिकित्सा विज्ञानमा योनीमार्गसम्बन्धी रोग निवारणका लागि प्रयोगमा ल्याएका हुन् । यस मुद्रामा सास तान्दै र छाड्दै भगोष्ठ (भल्भा) लाई तान्ने र खुम्च्याउने गरिन्छ ।
अब मैथुन (सेक्स) को सुरुवात सुगन्धित तेल वा मदिरा मसाजबाट सुरु गरिन्छ । मसाजले शरीरका सम्पूर्ण तनावलाई फालिदिन्छ र शरीर तथा मन दुवैमा स्फूर्ति ल्याउँछ । त्यसपछि दुवैको सासमा तालमेल ल्याउने अभ्यास गरिन्छ । यसमा एकले सास फाल्दा अर्काेले पनि फाल्ने र एकले तान्दा अर्काेले पनि तान्ने गरिन्छ । यसरी गहिरो सासको तालमेलले दुवैको मानसिकता एउटै बन्छ र दुई शरीर भए पनि मन एउटै हुन जान्छ । चुम्बन, स्पर्शलगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया गरिन्छ र सेक्स सुरु हुन्छ ।
अब नेपाल गुण्डा मुक्त बन्ने गृह मन्त्रालयमा ४ सय गुण्डाको लिस्ट तयार, १० गुण्डाको ‘इन्काउन्टर’ गर्न ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ !
काठमाडौं, १३ जेठ । गृहमन्त्रीमा राम बहादुर थापा नियुक्त भएपछि मुलुकभर गुण्डा गर्दी गर्ते ,